Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Drone cusub ayaa kor u qaadi kara 200 kg wuxuuna duulaa 40 km
Ma haysaa tafaasiil dheeraad ah oo aad ku darto war -saxaafadeedkan?
Ma haysaa macluumaad dheeri ah, sawirro, fiidyowyo ama xiriiro waxtar leh?
Guji halkan si aad u qaadato warsaxaafadeedkan iyo waliba hel aragti badan.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida noogu soo dhejiso sii deynta mustaqbalka, tag www.travelnewsgroup.com/visibility
Volocopter ee korontada culeyska culus ee korontada VoloDrone waxay maanta samaysay duulimaadkeedii ugu horreeyay ee dadweynaha ITS World Congress 2021. Iyadoo ay weheliyaan hoggaamiyaha saadka caalamiga ah ee DB Schenker, Volocopter, oo ah hormuudka dhaqdhaqaaqa hawada magaalooyinka (UAM), ayaa muujiyey is-dhexgalka aan kala go ’lahayn ee VoloDrone ee silsiladda saadka saadka oo leh xamuul dhammaad-ilaa-dhammaad bannaanbax gaadiid. Wada -hawlgalayaashu waxay muujiyeen horumarkooda la taaban karo tan iyo markii DB Schenker uu noqday maalgaliye istiraatiiji ah Volocopter horaantii 2020.
VoloDrones -ka ayaa u qalabaysan inay qaadaan culays dhan ilaa 200 kg. Tani waxay ka dhigaysaa inay ku habboon yihiin hawlo badan oo hawl-culus ah oo si daacadnimo ah sidoo kale aad u fiican.
VoloDrones -ka ayaa masaafada u socda. Iyada oo leh masaafo dhan ilaa 40 kiiloomitir, waxay ku dhex shaqayn karaan halbeeg weyn oo laga bilaabo meesha ay ka duulayaan. Marka lagu daro culeyska weyn ee tani waxay fureysaa fursado waaweyn.
Si buuxda koronto
Sida tagaasidayada hawada ee VoloCity, VoloDrone waxay ku shaqaysaa 100% koronto ku shaqeeya waxayna ku duushaa bilaa qashin. Nadiif ah oo deggan - waa habka ugu fiican ee gaadiidka.